लक-डाउनको बेला एका-बिहानै लुकेर सीमा पार गर्दा-गर्दै ११ भारतीय मुस्लिम प`क्रा`उ ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Lockdown News/लक-डाउनको बेला एका-बिहानै लुकेर सीमा पार गर्दा-गर्दै ११ भारतीय मुस्लिम प`क्रा`उ !
महोत्तरी जिल्लामा लकडाउनको अवस्थामा सीमा पार गर्दागर्दै आज बिहान ११ भारतीय मुस्लि`म पक्रा`उ परेका छन् । जिल्लाको मनरासिस्वा नगरपालिका–९ बथ`नाहा गाउँ हुँदै नेपालबाट भारत जान खोजेका ११ मु`स्लिमलाई नेपाल प्रहरी र सश`स्त्र प्र`हरीको सह`योगमा प`क्राउ गरिएको व`डाध्यक्ष बलिराम रायले बताउनुभयो ।
हात-हातमा झोला बोकेका सबैजना लहरै नेपालबाट भारत जाँदै गरेको अवस्थामा उनीहरुलाई प्रहरीको सहयोग लिएर पक्राउ गर्न सफल भएको वडा-ध्यक्ष रायले बताउनुभयो । प-क्राउ परेका उनीहरूले भारतको पश्चिम बङ्गाल राज्यको कोल-काता घर भएको बताएका छन् ।
उनीहरुले महोत्तरीको एकडारा गाउँ-पालिका–५ कोल्हुवा बगेया गाउँमा लामो समयदेखि जस्ता-पाताका भाँडा-कुँडा र ड्रम बनाउने काम गर्दै आएको बताएका छन् ।
लक-डाउनको अवधि लामो हुँदै गएपछि खानपिनमा समस्या भएको भन्दै उनीहरु लुकेर आज मिर्मिरे बिहानीमै आफ्नो घरतिर जाँदै गरेको अवस्थामा सीमानाका मै पक्रा`उ परेका हुन् । पक्रा`उ परेका उनीहरूलाई अहिले नेपाल प्रहरीले प्रहरी-चौकी कट्टि-कटैयामा लगेको छ ।
उनीहरुलाई नगर-पालिकाका प्रमुख, सु“रक्षा निकाय, प्रशासन`n`सहित सँग समन्वय गरी क्वारेन्टा`इनमा राख्ने वा कहाँ के गर्नेबारे तय गरिने वडा ध्यक्ष रायले बताउनु भयो ।
टयाक्सी तथा निजी सवारी बिहान ६ देखि साँझ ८ बजेसम्म चलाउन पाइने
काभ्रेमा थप ९ मा संक्रमण पछि धुलिखेल अस्पताल सिल !